Canadanepal.net: नेपालमा युरेनियम कसरी भित्रियो ?
नेपालमा युरेनियम कसरी भित्रियो ?
प्रहरीले आणविक हतियार तथा विष्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने साढे दुई किलो युरेनियमसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपालमा युरेनियम बरामद गरिएको यो पहिलोपटक हो । त्यस्तो रसायन नेपालमा कसरी भित्रियो त ?